कुकुरको पछि लागेर घना जंगलमा गएका बालक ह,रा,एपछि खोज्न ३ दिन लाग्यो, हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर उद्धार गरियो – Taja Khawar
कुकुरको पछि लागेर घना जंगलमा गएका बालक ह,रा,एपछि खोज्न ३ दिन लाग्यो, हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर उद्धार गरियो
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ समय: १८:४२:५६
एजेन्सी । घना जंगलमा एउटा बच्चाले ३ दिनसम्म बिताउनु के सामान्य कुरा हो र ? त्यो पनि हिउँले ढाकिएको डरलाग्दो रुसको साइबेरियाको जंगलमा ? ब्वाँसा र भालुको बिगबिगी रहेको साइबेरिया जंगलमा तीन वर्षको बच्चा सेरिन डोपचटले ७२ घण्टा एक्लै बिताउँदा पनि ति बालकलाई सकुशन उद्धार गरिएको छ ।
जंगलमा हराएका बालक डोपचट कुकुरको बच्चाको पछि लागेर जंगलमा भएको अनुमान गरिएको छ । उनी जंगलको छेउमा रहेको गाउँमा हजुरआमासँग बस्दै आएका थिए । बालकलाई गाउँलेसहित स्थानीय प्रहरी तथा एउटा हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर उद्धार गरिएको हो ।उक्त जंगलमा ह्रिंसक जनावरहरु पनि रहेको र बालक तिनीहरुबाट बच्च सफल भएकोमा अविभावकहरु खुशी देखिएका छन् ।
यी हुन् भाग्य सूचक अर्थात चुम्बक जसरी पैसा तान्ने विरुवा, घरमा लगाउनुभयो भने चम्किन्छ भाग्य काठमाडौँ । शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग जोडिएको छ। जुन विरुवा घरमा रोप्दा पैसा चुम्बक जसरी तान्ने विश्वास गरिन्छ। आज हामी ती विरुवाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जसलाई भाग्य सुचक मानिन्छ अर्थात धन आर्जन गर्ने गर्छ ।
यस दिशामा राख्दा यो राम्रो फल्छ र फुल्छ पनि । घरमा मनी पलान्टका बिरूवाहरू राख्ने गर्नाले तपाईंको घरमा पैसाको कहिल्लै पनि कमी हुँदैन । तपाईको कुनै पनि कार्य पैसाको अभावका कारण रोक्ने अवस्था आउँदैन । शमी रूखः शमी रूख वस्तुको हिसाबले धेरै विशेष मानिन्छ । शमी रूख शंकरजीको सबैभन्दा प्रिय मानिन्छ । यस्तो विश्वास गरिन्छ कि घरमा शमी रूख रोप्नाले सम्पूर्ण गरिबी हटेर जान्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस के तपाईमा यी ५ संकेत छन् ? उसोभए तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ !
मायामा भरोसाको लायक हुँदैनन् यी राशिका व्यक्ति, हरेक बखत तोड्दछन् दिल यो विश्वास गरिन्छ कि प्रत्येक सोमबार शिवलाई शमीको फूल र पातहरू चढाउँदा तपाईंको घरमा खुशी र समृद्धि आउँछ । तपाईं यसलाई पैंसाको रूख पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले तपाईंको घरमा पैसाको बहार ल्याएर गरिबी हटाउँछ ।
अश्वगन्धाः वास्तवमा अश्वगन्धा बोटलाई एकदमै धनी मानिन्छ। घरमा अश्वगन्धाको रूख रोप्नाले सुख र समृद्धि आउँछ। यो औषधीको रूपमा पनि उपयोगी छ र यसका धेरै अन्य फाइदाहरू रहेका छन्। अश्वगन्धाका फूलहरूलाई पनि भगवानको पूजामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।श्वेटार्कः श्वेटार्क दुधको बोट हो र यसलाई राम्रो भाग्यको सूचक पनि मानिन्छ ।
ख्याल गर्नुहोला कुनै सेतो पदार्थ निस्कने बिरुवा घरमा राख्नु हुँदैन । श्वेटार्क भनिने यो बोटलाई गणेशको प्रतीक मानिन्छ। यो उत्तम छ कि तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्नहोस्। यस कारणले गर्दा, घरमा सधैंका लागि शान्ति र खुशी रहन्छ।
Last Updated on: June 4th, 2021 at 6:42 pm